Fifidianana filoham-pirenena ao Madagasikara 2013 Info. Abo
ⓘ Fifidianana filoham-pirenena ao Madagasikara 2013
Hajo Andrianainarivelo: 10.51% eram-pirenena. Mitarika ao aminny faritra Atsimo Atsinanana 17.06%
Edgard Razafindravahy: 4.35% eram-pirenena. Tsy mitarika na aiza na aiza
Saraha Georget Rabeharisoa: 4.5% eram-pirenena. Tsy mitarika na aiza na aiza
Camille Vital: 6.85% eram-pirenena. Mitarika ao aminny faritra Atsimo Andrefana 28.58%
Hery Rajaonarimampianina: 15.93% eram-pirenena. Mitarika ao aminny faritra Matsiatra Ambony 32.74%, Ihorombe 20.18%, Vatovavy-Fitovinany 14.74%, Melaky 16.33%, Sofia 20.02%, Androy 30.28% ary Anosy 26.07%
Jean-Louis Robinson: 46.5%, mitarika ao aminny faritanini Antananarivo ary ny faritra Betsiboka
Hery Rajaonarimampianina: 53.5% mitarika ao aminny faritanini Toamasina, Fianarantsoa, Antsiranana, Mahajanga afatsy Betsiboka ary Toliary